Toeram-pikarohana eny Arivonimamo : hiroso amin’ny fanovana teknika ny manampahaizana | NewsMada
Toeram-pikarohana eny Arivonimamo : hiroso amin’ny fanovana teknika ny manampahaizana
Taorian’ny fandraisan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny fanalahidin’ny ivontoerana avy any amin’ny orinasa Telma ahitana ny « satellite » maromaro eny Arivonimamo, hiroso amin’ny fanavaozana tsy maintsy atao ny teknisianin’ny minisitera miaraka amin’ny manampahaizana avy any Afrika Atsimo. Tafiditra amin’ny tetikasa Square Kilometer Array (SKA) ny hetsika ahafahana mandinika ny tantaran’ny tany avy amin’ny sary eny amin’ny zanabolana sy ny zavatra mandrafitra ny tontolo any ambony tsy taka-maso any. « Antenne » fampiasa ho an’ny fahitalavitra ny eny an-toerana ankehitriny ka avadika ho fitaovana mikirakira ny « astrophysique » sy ny « radio astronomie », hoy ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny fikarohana ara-tsiansa ao amin’ny minisitera, Ramiarison Claudine, omaly teny Arivonimamo. Hanomboka ny asa teknika handraisan’ny Malagasy sy avy any Afrika Atsimo satria efa vita ny fanombanana ny zavatra rehetra hatao. Teo koa ny fanofanana nanomboka tamin’ny taon-dasa ny mpianatra sy mpampianatra mpikaroka hikirakira izany ivontoerana izany.
Firenena fahatelo manana io ivontoerana ho an’ny » radio astronomie » io i Madagasikara izay tafiditra amin’ny fifanarahana amin’ny firenena aty Afrika hanatsarana ny fikarohana momba ny any ambony any.
Namboly hazo eny amin’ny manodidina ny ivontoerana ny mpiasan’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny sampandraharaha mifandraika aminy rehetra, omaly. « Tamin’ny zana-kazo natsatoka ny taon-dasa, 80% ireo nahavanona vokatry ny fikarakaran’ny CNRE», hoy ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony, Ralijaona Guy Christian.